Shanghai International Occupational Uniform ngosi ga-ẹkenịmde na Shanghai - National ngosi na Convention Center (NECC)
Ihe ngosi ihe eji eme ahia nke mba uwa nke Shanghai ga abia n ’idozi ya
Ihe ngosi eji eme ihe nke mba uwa nke Shanghai
At Shanghai - Ngosipụta Ọha na Mgbakọ Mba (NECC) Nke 168 East Yinggang Road, Shanghai, China Categories: Akwa na akwa Tags: Uwe Agbamakwụkwọ, Uwe mgbede, Nlekọta Ọrụ Ndị Nlekọta, Ndị Ọrụ Ngwá Ọrụ, Unlọ ọrụ ụlọ ọrụ, Business Casual eyi, Uniform School, Uwe Park
Hailọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ nke Shanghai (nke dị mkpirikpi maka "OUE")
Hailọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ nke Shanghai (nke dị mkpirikpi maka "OUE") bụ nke Textile & Garment Chamber of Commerce, All-China Federation of Industry & Commerce na Liso Group, nke jikọtara ụlọ ọrụ dị elu iji wulite usoro ịzụ ahịa ọhụụ ọhụrụ na otu nkwụsị. maka uwe eji arụ ọrụ, ọ bụkwa ihe ngosi ọkachamara nke emebere maka nchịkwa ụtụ isi, nchịkwa ikpe ziri ezi, ụlọ ọrụ, na nchịkwa azụmahịa, ụtaba, Ngwuputa, ọkụ ọkụ eletrik, mmanụ, mmanụ ọkụ, ikuku, ụgbọ okporo ígwè, ego na ụlọ akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ nri. na ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. The OUE ga-enwe na Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, nke ga-enwe ngosipụta zuru oke nke uwe ọrụ nchịkwa, ndị na-a smoụ sịga na-arụ ọrụ, uwe, ngwa ọrụ ọrụ, na akwa na ndị ahịa ndị ọzọ na-ahazi. Ọ na-enye ọtụtụ ihe ngwọta na otu ọrụ azụmaahịa na-akwụsị maka akụkụ gọọmentị na nkeji na ụlọ na mba ofesi, ndị na-ekesa ngwa ahịa ọrụ, ndị ahịa, ndị na-ere ahịa, ndị na-azụ nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọha na eze, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Shanghai International Expo Expo abụrụlarị ihe ngosi ikuku nke ga-eme ka mmepe ụlọ ọrụ na nhazi nke ụlọ ọrụ nke ọrụ ọrụ, ọ bụrụlarịrị ngosipụta ọkachamara nke China nke edo edo
"OUE" bụ mba ahia ikpo okwu maka na-eduga ọrụ edo ika ọwa ewu na otu zuo na China, na Shanghai International Ọrụ Uwe Ihe ngosi ẹkenịmde ọma na Shanghai World Expo Ngosi & Convention Center N'usoro nke size na nkọwa, ọ na-ahapụ a ọhụrụ mmetụta na ndị ngosi na ndị ọbịa. 40,000 square mita maka ihe ngosi ahụ, ọ gbakọtara ndị ọbịa ọkachamara 30,000, na e nwere ụdị ndị edo edo edo 700 sitere na mba na mpaghara 20 na-esonye na ngosi ahụ. E wezụga nke ahụ, ọ dọtara mgbasa ozi 500 nke ụlọ na nke esenidụt, 30 ndị China na ndị na-ede akụkọ si mba ọzọ ka ebuputa na ebe a, na-atụnyere OUE nke atọ, ọnụọgụ ndị ngosi nwere mmụba nke 56%, ebe ngosi ahụ nwere mmụba nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 180%, na ndị na-ege ntị na ebe ahụ nwere mmụba nke 113%, nke setịpụrụ usoro azụmaahịa mba ụwa maka ndị sonyere ka ha nwee ebe dị nso na ịrụ ọrụ nke ọma.
Nzukọ nzuko nkwukọrịta azụmahịa, nzukọ nkwalite ụlọ ọrụ, ngosipụta ngwaahịa ọhụụ, nhọrọ akara, ụzọ egwu dị egwu, na ọtụtụ nzukọ ndị ọzọ na-eme n'otu oge n'oge ngosi ahụ, nke nwere ọnọdụ ziri ezi nke ndị otu dị elu, na-ewuli usoro dị iche iche, na-eduzi -ihe omumu nke ulo oru ma na akwalite mmepe nke ulo oru. Gụnyere China Orụmbọm Ulo Ulo Oru, China Occupational Uniform Designmit Summit, China ccdị Mberede Redị Ntọhapụ, Onyinye maka Topkpụrụ iri ndị China kachasị ewu ewu nke ejiji, ,kpụrụ omume ndị China na-ahụkarị na nzukọ ndị ọzọ. Shanghai International Expo Expo abụrụla ihe ikuku nke ga-eme ka mmepe ụlọ ọrụ na nhazi nke ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ, ọ ghọwokwa onye ọrụ ọkachamara na-ahụ maka ndị ọrụ China.
Mpaghara ahia ejiji uzo ahia:
Uwe azụmahịa, uwe ndị ọdịda anyanwụ, akwa, akwa agbamakwụkwọ, uwe elu, uwe ndị omenaala mara mma, ngwa ahịa （tie, akpụkpọ anụ, ịchafụ silk, wdg）;
Otu ndị ọrụ edo edo na-edozi mpaghara:
Uniformlọ ọrụ edo mpaghara: maka ịmegharị otu maka edo edo maka gọọmentị, ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ yana maka akwa ụlọ ọrụ;
Ọrụ otutu ọrụ: uwe elu, uwe ọrụ, na uwe nchebe pụrụ iche, wdg maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ịnweta;
Mpaghara pụrụ iche:
Ulo akwukwo: Ulo akwukwo nke ulo akwukwo na ulo akwukwo, tinyere akwa mmiri / udu mmiri, akwa uwe, oge oyi, na ejiji egwuregwu;
Mpaghara ụlọ nkwari akụ: uwe maka ndị ọrụ nchịkwa na ndị ọrụ;
Ekike ahụike: edo edo, edo edo, edo akwụkwọ ntuziaka ahụike, edo edo, akwa ụmụ nwanyị na-edina, ime ụlọ ọrụ, wdg;
Egwuregwu edo egwuregwu: uwe n'èzí, uwe golf, iyi maka igwe kwụ otu ebe, ọgba tum tum, ịkụ azụ, njem mmụta na ịkpụ ahụ, wdg;
Shei, ihe inyeaka na ngwa:
Shell na inyeaka ihe maka edo edo, uwe ngwa （akpụkpọ ụkwụ, okpu, akpa, silk ịchafụ, akara, eriri n'úkwù, tie）, wdg;
Sọftụwia mepụtara uwe, akụrụngwa, yana ngwaahịa ngwaahịa inyeaka:
Kwa akwa akụrụngwa, CAD / cam usoro / nghọta usoro, ákwà Anam Udeme na ịcha akụrụngwa, uwe customizing tinyekwa usoro, laser akụrụngwa, ironing na gụchara akụrụngwa, embroidery na-ebi akwụkwọ na ngwá, ultrasonic akụrụngwa, tupu ibelata, na bonding ngwá na enterprise ọmụma management usoro , wdg.